रगत दोषी - क्रोधको दोस्रो र तेस्रो शीशी - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
मे २०, २०२२ अप्रिल २२, २०१९ द्वारा प्रकाशक
“अनि दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो भाँडो समुद्रमा खन्याए। र यो मरेको मानिसको रगत जस्तै भयो: र हरेक जीवित प्राणी समुद्रमा मरे।" ~ प्रकाश १६:३
जब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ पापको दोषी हुनुहुन्छ, तपाइँले यो पनि जान्नुपर्दछ र सचेत हुनुपर्दछ कि तपाइँको आत्मा आध्यात्मिक रूपमा मरेको छ। त्यो परमेश्वरको क्रोधको शीशीहरू खन्याउने कुराको अंश हो: तपाईंको आध्यात्मिक अवस्थाको पीडा महसुस गरेर तपाईंलाई सचेत गराउनको लागि, ताकि तपाईं पश्चात्ताप गर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरसँग सही हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले अघिल्लो पोस्टबाट याद गर्नुहुनेछ कि समुद्रले धेरै देशका धेरै मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जो पाखण्डको भावनाबाट प्रभावित हुँदा आत्मिक रूपमा मर्छन्। विशेष गरी जब तिनीहरू पतित ईसाई धर्मको प्रभावमा छन् जुन अब येशूप्रति वफादार छैनन्।
"अनि उसले मलाई भन्यो, पानीहरू जुन तिमीले देख्यौ, जहाँ वेश्या बस्छे, मानिसहरू, र भीडहरू, र राष्ट्रहरू, र भाषाहरू हुन्।" ~ प्रकाश १७:१५
प्रकाश १७ को वेश्याले ख्रीष्टियन भएको दाबी गर्ने कपटलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। मण्डलीहरू जसले आफूलाई ख्रीष्टको पत्नी भएको दाबी गर्छन्, तर तिनीहरू येशू र उहाँको वचन पालन गर्न आत्मिक रूपमा अविश्वासी छन्। अनि तिनीहरू साँचो ख्रीष्टियनहरूलाई तल ल्याएका र सताउने दोषी हुन्छन्।
त्यसोभए यो स्पष्ट हुन थाल्छ कि पानीको बिरूद्ध रगतको न्याय वास्तवमा धेरै मानिसहरूको विरुद्धमा छ। किनभने वेश्या मानिसहरूमाथि बसेर तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ।
पहिले, प्रकाशमा, (र इतिहासमा) सबैजना यस पाखण्डको प्रभावमा मरेका थिएनन्। केही अझै बाँचे। यो प्रकाश अध्याय 8 र पद 8 मा प्रकट भएको थियो, तेस्रो र चौथो शताब्दीमा चर्च नेतृत्व आध्यात्मिक भन्दा बढी राजनीतिक विचारधारा भएको देखाउँछ। तिनीहरूले सांसारिक लाभ र शक्तिको लागि सुसमाचारमा सम्झौता गरे, र अन्ततः रोमन क्याथोलिक चर्च गठन गरे।
"अनि दोस्रो स्वर्गदूतले बज्यो, र त्यो आगोले बलिरहेको एउटा ठूलो पहाड जस्तै समुद्रमा फ्याँकियो। समुद्रको तेस्रो भाग रगत भयो; समुद्रमा भएका जीवहरूको एक तिहाइ भाग मरे। र जहाजहरूको तेस्रो भाग नष्ट भयो।" ~ प्रकाश ८:८-९
आगोमा परेको ठूलो पहाड (जसलाई चर्च मानिएको थियो) जनताको राजनीतिको समुद्रमा निभाइयो र यसले धेरैलाई जो एक समयको आध्यात्मिक थियो, पापले आफ्नो जीवनमा पुन: प्रवेश गरेर मर्न बाध्य तुल्यायो। परमेश्‍वरका जनहरूका वरिपरि भएको यो ऐतिहासिक मध्य-युगको अवस्था पूर्ण रूपमा भ्रष्ट संगठनमा पूर्ण रूपमा परिपक्व नभएसम्म "उत्तेजित" भइरहनेछ। इतिहासको यो भाग प्रकाशको रूपमा पहिले पहिचान गरिएको थियो Pergamos चर्च युग। एक समय जब शैतानले रोमन क्याथोलिक चर्चको गठन मार्फत पाखण्डी अधिकारको सिट पूर्ण रूपमा स्थापित गर्यो।
र यसरी समुद्रको एक तिहाइ भाग पनि रगतको दोषी बन्यो, किनभने ख्रीष्टको रगत जसले तिनीहरूलाई एक पटक बचाएको थियो, अब उनीहरूलाई दोषी देखाउँदै थियो। किनभने तिनीहरू क्रिस्चियन भएको दाबी गरेर पनि आफ्ना पापहरूमा फर्किरहेका थिए। तर सबैजना रगतको दोषी भएनन्, किनकि समुद्रमा भएका सबैले सुसमाचारलाई स्पष्ट रूपमा सुन्ने मौका पाएका थिएनन्। फलस्वरूप, सम्पूर्ण समुद्र रगतमा परिणत भएन, किनकि सबैले अझै ख्रीष्टलाई अस्वीकार गर्ने र परमेश्वरका साँचो मानिसहरूलाई सताउने दोषी थिएनन्।
तर प्रकाश 16 मा हामी दोस्रो "शिशी स्वर्गदूत" द्वारा देख्छौं: मानिसहरूको समुद्रमा सबैजना प्रभावित भएका छन्।
कसैलाई पनि छुट छैन किनभने सबैलाई उनीहरूको आत्मामा रहेको रगत-दोषीको बारेमा सचेत गराइन्छ। जबसम्म येशू ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट छुटकारा दिनुहुन्न, हामी रगत-दोषी छौं!
र त्यसपछि हामी देख्छौं कि यो रगत-दोषीपनले ती मानिसहरूलाई पनि असर गरेको छ जो बाहिर गएर सुसमाचार सन्देशको रूप फैलाउँछन्, तर आफ्नै फाइदाको लागि यसलाई हेरफेर गर्छन्। तिनीहरू रगत दोषी छन्, किनभने फाइदाको लागि सुसमाचार प्रयोग गर्दा, तिनीहरूले मात्र पर्याप्त आध्यात्मिक भोजन प्रदान गर्न पर्याप्त सुसमाचार दिन्छन् जसले मानिसहरूलाई मद्दतको लागि हेरिरहेका छन्। यसले आत्मामा आध्यात्मिक अनिकाल उत्पन्न गर्छ, र धेरै मानिसहरू आत्मिक रूपमा मर्छन्। अनि भ्रष्ट मन्त्रालयको दुव्र्यवहारले जनता तितो बन्छन् ।
यो आध्यात्मिक अवस्था पहिले प्रकाश मा पहिचान गरिएको थियो क्याथोलिक मण्डलीको सेवकाईले बाइबललाई पल्पिटमा बाँधेर र मानिसहरूले नबुझ्ने भाषामा वचन राखेर आध्यात्मिक अनिकाल उत्पन्न गर्दा तेस्रो सिल खोलिएको थियो। फलस्वरूप देश भर अनिकाल फैलाएर क्याथोलिक चर्चको सेवकाई रगतको दोषी भयो। र त्यसबेलादेखि, विभिन्न मण्डलीका अन्य धेरै मन्त्रीहरूले पनि त्यस्तै काम गरेका छन्।
त्यसोभए अब परमेश्वरको क्रोधको तेस्रो शीशीमा, हामी यो सेवकाईलाई एउटा नदीको रूपमा चित्रण गरिएको देख्छौं जुन भूमिमा जीवित पानीहरू फैलाउने मानिन्छ। तर तिनीहरूको सुसमाचारको दुरुपयोग र मानिसहरूलाई तीतो बनाउनको कारण, तिनीहरू "रगत-दोषी" को रूपमा न्याय गरिन्छ। धर्मशास्त्रमा धेरै ठाउँहरूमा हामीलाई निर्देशन दिइएको छ कि जससँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तिनीहरू नदी र झरना जस्तै छन् जसले ख्रीष्टको जीवित पानीलाई अरू धेरैमा फैलाउँछ। तर यहाँ प्रकाश १६ मा ती नदीहरू र झरनाहरू भ्रष्ट हुँदा के हुन्छ भनेर देखाइएको छ!
“अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो भाँडो नदीहरू र पानीका झरनाहरूमा खन्याए। र तिनीहरू रगत भए।" ~ प्रकाश १६:४
मा फर्कनुहोस् प्रकाश 8 तेस्रो तुरही सन्देशवाहक (स्वर्गदूत) ले कसरी पतित सेवकाईले मानिसहरूलाई तीतो बनाउन सक्छ भनेर खुलासा गरे। तिनीहरूको आत्मामा सन्देशद्वारा तिनीहरू पृथ्वीमा मानिसहरूमा फैलिएका छन्।
"अनि तेस्रो स्वर्गदूतले बज्यो, र त्यहाँ स्वर्गबाट एउटा ठूलो तारा खस्यो, त्यो बत्ती जस्तै बलिरहेको थियो, र त्यो स्वर्गमा खस्यो। नदीहरूको तेस्रो भाग, र पानीका झरनाहरूमा; अनि ताराको नाउँ वर्मवुड हो। र धेरै मानिसहरू पानीबाट मरे, किनभने तिनीहरू तीतो बनाइएका थिए।" ~ प्रकाश ८:१०-११
फेरि, प्रकाश 8 मा यो आंशिक प्रभाव थियो त्यसैले धेरै मानिसहरू आत्मिक रूपमा मरे, तर सबै होइन। तर प्रकाश अध्याय 16 मा, यो शीशी पूर्ण भ्रष्टाचार देखाउँछ। ती सबै रगतको दोषी बनेका छन्!
याद गर्नुहोस्: प्रकाश अध्याय 16 मा शीशीहरूबाट खन्याउनु भनेको सबै कपट र पापमा परमेश्वरको न्यायको समापन हो।
यहाँ के देखाइएको छ कि आज, अन्तिम दिनहरूमा, पवित्रताको लागि आह्वानप्रति वफादार र आज्ञाकारी हुने अवशेषहरू बाहिर सबैजना आध्यात्मिक रूपमा मर्नेछन्। अरू सबै मरिरहेका छन् किनभने तिनीहरू छन् होइन बाहिर आउन कलको जवाफ दिँदै अविश्वासी "ईसाई धर्म" र धर्म।
"अनि मैले स्वर्गबाट अर्को आवाज सुनेँ, यसो भन्दै, मेरा मानिसहरू, त्‍यसबाट निस्‍केर आऊ, कि तिमीहरू त्‍यसका पापहरूका सहभागी नहोओ, र तिमीहरूले त्‍यसका विपत्तिहरू नग्रहण गर।” ~ प्रकाश १८:४
त्यसोभए प्रकाशको 8 औं अध्यायमा, पहिले तुरहीका स्वर्गदूतहरूले मानिसहरूलाई चेतावनी दिए, किनभने चेतावनी बिना जीवनमा थोरै कुराहरू हुन्छन्। र अब प्रकाश 16 औं अध्यायमा, शीशी स्वर्गदूतहरूले अविश्वासी कपटमा पूर्ण र अन्तिम सुसमाचारको न्यायहरू कार्यान्वयन गर्दैछन्। किन? किनभने येशूले अविश्वासलाई स्वीकार गर्नुहुन्‍न, र उहाँले विशेष गरी मानिसहरूलाई राम्रोसँग जान्‍दा जवाफदेही बनाउनुहुन्छ।
यदि तपाईंको जीवनसाथी हरेक दिन "मैले अरू कसैसँग यौनसम्पर्क गर्ने प्रलोभनमा दिएँ, तर म दिनहुँ यसो गरिरहँदा के तपाईंले मलाई माफ गर्नुहुन्छ? किनकी म अझै पनि तिमीलाई माया गर्छु” के तपाई उनीहरुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन! किनभने तिनीहरू गरिरहन्छन्।
त्यसोभए हामीले किन येशूले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्नुपर्छ जब हामी लगभग हरेक दिन भन्छौं "मैले शैतानको प्रलोभनमा फेरि पापी चीजहरू दिएँ (जस्तै म दिनहुँ गर्छु), तर म अझै पनि येशूलाई माया गर्छु।"
येशु एक पशओभर होइन जसले मानिसहरूलाई उहाँलाई हरेक दिन नयाँ क्रुसमा टाँग्न अनुमति दिनुहुन्छ।
"किनकि यो असम्भव छ कि जो एक पटक प्रबुद्ध थिए, र स्वर्गीय वरदानको स्वाद चाखेका थिए, र पवित्र आत्माको सहभागी बनाइएका थिए, र परमेश्वरको असल वचन, र आउने संसारका शक्तिहरूको स्वाद लिएका थिए, यदि तिनीहरूले टाढा झर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पश्चात्तापमा पुन: नवीकरण गर्न; तिनीहरूले परमेश्‍वरको पुत्रलाई फेरि आफैंलाई क्रूसमा टाँगेका देखेर, र उहाँलाई खुल्लमखुल्ला लाजमा पारे।" ~ हिब्रू ६:४-६
पानी रगतमा परिणत हुनु भनेको प्रभुको आह्वानलाई प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्ने मानिसहरूमा परमेश्वरको क्रोधको प्रतीक हो। पुरानो नियममा पनि यो प्रतीकात्मक रूपमा भएको छ।
“परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म नै परमप्रभु हुँ भनी तिमीहरूले यसैमा जान्‍नेछौ: हेर, म मेरो हातमा भएको लट्ठीले नदीमा भएका पानीहरूमा प्रहार गर्नेछु, र ती रगतमा परिणत हुनेछन्। नदीमा भएका माछाहरू मर्नेछन्, र नदी दुर्गन्धित हुनेछ। र मिश्रीहरूले खोलाको पानी पिउन लट्ठ गर्नेछन्।” ~ प्रस्थान ७:१७-१८
तपाईंले न्यायको यो सन्देशमा गल्ती पाउन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईंले प्रकाश अध्याय 16 मा थप पढ्नुभयो भने, यसले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि येशूलाई यसरी न्याय गर्ने अधिकार छ।
"अनि मैले पानीको दूतलाई यसो भनेको सुनें, हे प्रभु, तपाईं धर्मी हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, र हुनुहुन्थ्यो, र हुनुहुनेछ, किनकि तपाईंले यसरी न्याय गर्नुभएको छ। किनकि तिनीहरूले सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको रगत बगाए, र तपाईंले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभयो। किनभने तिनीहरू योग्य छन्।” ~ प्रकाश १६:५-६
तपाईंले ती मानिसहरूलाई देख्नुहुन्छ जो ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्न वफादार हुनेछैनन्, विश्वासी हुन छनौट गर्नेहरूसँग पनि गल्ती पाउनुहुनेछ: जसरी एक अविश्वासी साथीले विश्वासी साथीसँग गल्ती पाउनुहुनेछ। र अक्सर, इतिहासभरि, यो अविश्वासी ईसाई धर्म हो जसले वफादार ईसाईहरूलाई सताएको र मारेको छ।
त्यसैले माथिको शास्त्रले यसो भन्छ:
“किनकि तिनीहरूले सन्त र अगमवक्ताहरूको रगत बगाए, र तपाईंले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभएको छ; किनभने तिनीहरू योग्य छन्।”
पानी र झरनाहरू रगतमा परिणत भएका थिए किनभने धेरैले धर्मीहरूको गवाहीलाई मार्ने दोषी ठहरिएका छन्: गपशप, झूटा आरोपहरू, र तिनीहरूलाई शारीरिक रूपमा मार्ने।
र थप रूपमा, उनीहरूलाई धोका दिएर र उनीहरूलाई पूर्ण सुसमाचार सत्य नदिई अरू धेरै आत्माहरूको रगतको दोषी छन्! आध्यात्मिक ब्वाँसो मन्त्रीहरूले तिनीहरूले प्रचार गर्ने आत्माहरूलाई पूर्ण सुसमाचार घोषणा गर्दैनन्। यस विरुद्ध प्रेरित पावलले हामीलाई कडा चेतावनी दिए।
“यसकारण म तिमीहरूलाई यो दिनको अभिलेखमा लैजानेछु, कि म परमप्रभुबाट शुद्ध छु सबै पुरुषहरूको रगत। किनकि म तिमीहरूसामु परमेश्‍वरका सबै सल्लाहहरू घोषणा गर्नबाट पछि हटेको छैन। यसकारण आफ्नो रगतले किन्नुभएको परमेश्वरको मण्डलीलाई खुवाउनको लागि पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई पर्यवेक्षकहरू बनाउनु भएकोमा आफूलाई र सबै बगाललाई ध्यान दिनुहोस्। किनकि म यो जान्दछु, कि म गएपछि दुःखी ब्वाँसाहरू तिमीहरूका बीचमा प्रवेश गर्नेछन्, बगाललाई नछोड्ने। चेलाहरूलाई तिनीहरूको पछि तान्‍न तिमीहरूका आफ्नैहरूबाट पनि विकृत कुराहरू बोल्ने मानिसहरू खडा हुनेछन्। त्यसैले हेर्नुहोस्, र सम्झनुहोस्, कि तीन वर्षको अन्तरालमा मैले प्रत्येक रात र दिन आँसु बगाएर चेतावनी दिन छोडेको छैन। ~प्रेरित २०:२६-३१
अर्को प्रकाश अध्याय 16 मा पानी विरुद्ध न्याय सन्देश बलिदान को वेदी बाहिर एक आवाज द्वारा दोहोरो जायज छ।
"अनि मैले वेदीबाट अर्को एक जनाले यसो भनेको सुनें, यसरी नै, सर्वशक्तिमान् परमप्रभु परमेश्वर, तपाईंका न्यायहरू सत्य र धार्मिक छन्।" ~ प्रकाश १६:७
त्यसोभए बलिदानको वेदीबाट निस्केको यो आवाज कसको हो? बलिदानको वेदी मुनि बलिदान गरिएकाहरूको खरानी छ। हामीलाई प्रकाशको छैठौं अध्यायमा तिनीहरू को हुन् भनेर पहिले नै देखाइएका थिए.
"अनि जब उहाँले पाँचौं मोहर खोल्नुभयो, मैले वेदी मुनि तिनीहरूका आत्माहरू देखे जो परमेश्वरको वचनको लागि मारिएका थिए, र तिनीहरूले राखेको गवाहीको लागि: र तिनीहरूले चर्को स्वरमा यसो भने, "कहिलेसम्म, हे। प्रभु, पवित्र र सत्य, तपाईंले न्याय गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहोस् पृथ्वीमा बस्ने तिनीहरूमाथि? अनि तिनीहरूमध्ये प्रत्येकलाई सेतो लुगा दिइयो। र तिनीहरूलाई भनिएको थियो, कि उनीहरूले थोरै सिजनको लागि आराम गर्नुपर्छ, जबसम्म तिनीहरूका सँगी सेवकहरू र तिनीहरूका भाइहरू, जुन तिनीहरू जस्तै मारिनेछ, पूरा नहुनु पर्छ। ~ प्रकाश ६:९-११
त्यसोभए अब, परमेश्वरको न्यायको क्रोधको शीशीहरू खन्याउदै, परमेश्वरले प्रत्येक पवित्र र विश्वासी व्यक्तिको प्रार्थनाको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जो कहिल्यै नक्कली कपटी इसाईहरूद्वारा सताइएको छ। परमेश्वरले रगत-दोषीहरूलाई "तिनीहरूको रगतको बदला" लिनुहुन्छ - किनभने बदला लिने काम परमप्रभुको हो। एक साँचो क्रिश्चियनले तपाईंको सतावटको बदला लिने छैन भनेर मात्र, तपाईंको न्याय हुनेछैन भनेर आफैंमा तर्क नगर्नुहोस्। किनभने परमेश्वरले बदला लिनुहुनेछ!
"प्रिय प्रिय हो, बदला नलिनुहोस्, बरु क्रोधलाई स्थान दिनुहोस्: किनभने लेखिएको छ, बदला लिने मेरो हो; म चुक्ता गर्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ।" ~ रोमी १२:१९
त्यसोभए हामी को हौं? सताइएका विश्वासीहरूको अंश, वा अविश्वासी कपटीहरूको अंश?
के हामी येशू ख्रीष्टको पश्चात्ताप र उहाँको पूर्ण सुसमाचारप्रति साँचो विश्वासयोग्यताको आह्वानलाई जवाफ दिएर चेतावनी र क्रोधलाई ध्यान दिन इच्छुक छौं?
नोट: तलको यो रेखाचित्रले पूर्ण प्रकाश सन्देश भित्र दोस्रो र तेस्रो शीशी सन्देशहरू कहाँ छन् भनेर देखाउँछ। यी "परमेश्‍वरको क्रोधको भाँडाहरू" सन्देशहरूले कपटको प्रभावलाई नष्ट गर्ने परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्दछ। प्रकाशको उच्च स्तरको दृष्टिकोणलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तपाईंले "प्रकाश को रोडमैप।"
कोटीहरू7शीशी, झुटो मन्त्री, झूटा अगमवक्ता, प्रकाश १6, धर्मी न्यायाधीश ट्यागहरू तीतो, रगत, मृत्यु, न्याय, क्रोध पोस्ट नेभिगेसन